စွန့်ပစ်ထားသောဖုန်းမှအခမဲ့ Little Library သို့ DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
အပေါ် Posted သြဂုတ်လ 23rd, 2021
Dutchtown မှတဆင့် South Grand ကိုမောင်းနှင်ပြီး Merb's Candies ၏တောင်ဘက်၊ ၄၀၁၈ South Grand တွင်ရှိသော hulking အိမ်၏ရှေ့တွင်ကြာရှည်စွာပေးဆပ်ရသည့်ဖုန်းမတ်တပ်ကိုသင်သတိပြုမိပေမည်။ ငွေပေးဖုန်းများသည်မျိုးသုဉ်းလုနီးပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ငွေပေးချေသည့်ဖုန်းဖြစ်သည်ကိုမှတ်မိသေးသူတိုင်း၏မျက်လုံးကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။
Dutchtown နေထိုင်သူ Ben Cohen သည်ရပ်ရွာကိုတန်ဖိုးထားသည့်အနေနှင့်လွမ်းဆွတ်ဖွယ်အရာအားပြန်လည်နေရာချရန်အခွင့်အလမ်းကိုမြင်သည်။ Cohen သည်အခကြေးငွေပေးရသောဖုန်းအဖုံးဟောင်းကိုအခမဲ့စာကြည့်တိုက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ Benjamin Thomas နှင့်အခြားရပ်ကွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်တို့သည်မကြာသေးမီသောကြာနေ့ညနေတွင် Cohen နှင့် ပူးပေါင်း၍ phone stand ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့်၎င်းအားဘ ၀ သစ်ကိုငှားရမ်းရန်ပြောကြားခဲ့သည်။
Thomas သည်သစ်သားကိုဆယ် ယူ၍ အလုံပိတ်ပလပ်စတစ်ကော်လံနှင့်တယ်လီဖုန်းဟန်းဆက်အဟောင်းကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။ အဖွဲ့သည်တံခါးကိုစုရုံးလိုက်ပြီးလတ်ဆတ်သောဆေးသုတ်အင်္ကျီကိုထပ်ထည့်လိုက်သည်။
အနည်းဆုံး ၂၀၁၅ ကတည်းကလစ်လပ်ခဲ့သောဖုန်းနှင့်အိမ်ရှေ့ပတ်လည်၌ပေါင်းပင်များနှင့်အခြားတိုးပွားလာနေသောရှင်းလင်းရေးအမည်မသိမြေပုံပညာရှင်တစ် ဦး ရောက်ရှိလာသည်။ မြို့မှတ်တမ်းများအရအဆောက်အ ဦး နှင့်လျှပ်စစ်ပါမစ်များကိုမကြာသေးမီက ၄၀၁၈ South Grand တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ငွေပေးချေရုံဖုန်းထက်ပိုသောဤလိပ်စာတွင်ပြဿနာကိုတွေ့လိမ့်မည်။
လောလောဆယ်တော့စာကြည့်တိုက်သေးသေးလေးမှာစာအုပ်တွေအခမဲ့ယူခွင့်ရှိတယ်။ Cohen သည်သေတ္တာကိုမပျက်စီးနိုင်သောအဆာပြေများနှင့်လိုအပ်သောအိမ်နီးချင်းများအတွက်သေတ္တာများနှင့်လူများ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကူညီရှာဖွေပေးနိုင်ရန်မိုးလေဝသအထောက်အထားအရင်းအမြစ်လမ်းညွှန်ကိုပူးတွဲတင်ပြသည်။ စားပွဲဝိုင်း၊ ထိုင်ခုံများနှင့် Wi-Fi hot spot များတပ်ဆင်ခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသူများအတွက်ဆက်သွယ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးရန်ပြောဆိုမှုပင်ရှိသည်။
Dutchtown ရှိပထမဆုံးအခမဲ့စာကြည့်တိုက်ငယ်မဟုတ်ပါ။ လေးနှစ်ခန့် Dutchtown နေထိုင်သူသောမတ်စ်သည် Laclede Park ၏တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးတစ်ခု၊ Chippewa၊ Broadway နှင့် Jefferson တို့ဆုံရာအနီးအနားရှိအခြားစာကြည့်တိုက်သုံးခုကိုလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်း Broadway အနုပညာစီမံကိန်းGrand နှင့် Bates လမ်း၏တောင်ဘက်နယ်ခြားဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အနီးတွင်ရှိသည်။ “ ဒီရပ်ကွက်ကိုနည်းနည်းပိုကောင်းအောင်ငါကြိုးစားနေတယ်” ဟုကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်စာကြည့်တိုက်များစာအုပ်များ၊ အရောင်ခြယ်စာအုပ်များ၊ ခဲတံများနှင့်အခြားအနုပညာပစ္စည်းများဖြည့်တင်းပေးသောသောမတ်စ်ကဆိုသည်။
ထို့အပြင် Broadway နှင့် Meramec ရှိ Minnie Wood Memorial Square ၌စာကြည့်တိုက်များနှင့် VAL ဥယျာဉ် Virginia Avenue တွင် VAL Garden တွင်အိမ်နီးချင်းများပါ ၀ င်သောအစားအစာများနှင့်အခြားပစ္စည်းများအခမဲ့ဝေမျှနိုင်သော“ အခမဲ့စားစရာခန်း” တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
Thomas သည် pantry များပိုပေါ်လာသည်ကိုမြင်လိုသည်၊ သူသည် pay phone library ဘေးတွင်တစ်ခုကူညီတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်သည်။ အချို့သောအပိုစိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်ပုံမှန်အလှူငွေများနှင့်အတူသူသည်လိုအပ်သူများအတွက်ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သောစားစရာခန်းကိုပုံမှန်ကြည့်ချင်သည်။
Cohen နှင့် Thomas တို့သည်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများကွန်ယက်ကြီးထွားလာခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုသိုလှောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကွန်ယက်တစ်ခုကြီးထွားလာရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။ “ စာကြည့်တိုက်တွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့သူတော်တော်များများကသူတို့မှာသိုလှောင်ဖို့ခက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြတယ်” ဟု Cohen ကဆိုသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကွန်ယက်ကိုဤနည်းဖြင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်ထိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနှင့်လက်ရှိအပြန်အလှန်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုတိုးစေနိုင်သည်ဟုငါထင်သည်။ သင်အချိန်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုလှူဒါန်းရန်စိတ်ဝင်စားလျှင် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဒါကြောင့်ငါတို့ကမင်းကို Cohen, Thomas နဲ့အခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။
Cohen's သည်သူ့အိမ်နီးချင်းများအတွက်လက်လှမ်းမှီနိုင်သောအရင်းအမြစ်များကိုပံ့ပိုးပေးသောအခြားအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ သူသည်တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အခမဲ့အရင်းအမြစ်အကျိုးအမြတ်မယူသောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းနှင့်ရပ်ရွာအရင်းအမြစ်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ၀ င်ငွေနိမ့်သောသို့မဟုတ်မ ၀ င်သောလူများကိုအားပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ FreeSource သည်လိုအပ်သူများအတွက်နည်းပညာလက်လှမ်းမီရန်အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည်။
FreeSource ကယူလာပေးသည် Tech Support ကော်ဖီ သို့ သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ ပုံမှန် Tech Support Caféသည်နည်းပညာအခက်အခဲများကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်သော၊ သူတို့၏ကိရိယာများကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပိုမို လေ့လာ၍၊ အားလုံးပါဝင်။ တာဝန်ယူနိုင်သောနည်းပညာအသုံးပြုမှုအကြောင်းဗဟုသုတရရှိနိုင်သောဖွင့်လှစ်ထားသောနာရီဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် peer-to-peer အထောက်အပံ့ပေးရန်ရည်ရွယ်သော်လည်း Cohen သည်သူ၏ကျယ်ပြန့်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှုကျွမ်းကျင်မှုကိုဝေမျှလေ့ရှိသည်။
Applecart ပရောဂျက် အိမ်ရာမဲ့အိမ်နီးချင်းများအားအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်နှင့်အခြားမိုဘိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်ရည်ရွယ်သောနောက်ထပ် FreeSource လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ FreeSource ရဲ့မစ်ရှင်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာပိုင်းအရရော၊ အခြေအနေအရပါ၊ Project Applecart က Wi-Fi hot spot, charging station နဲ့အခြားလူတွေဆီကိုရောက်နိုင်တဲ့အခြားအထောက်အပံ့များနဲ့အရင်းအမြစ်များပါ ၀ င်ဖို့တွန်းလှည်းတွေကိုပြန်လည်နေရာချပါလိမ့်မယ်။ စုရုံးရန်လိုသည်။
Cohen သည် South Grand ရှိ pay phone stand ကဲ့သို့စာကြည့်တိုက်နေရာများသို့အခမဲ့တွန်းလှည်းများယူလာရန်မျှော်လင့်သည်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာများကသူတို့၏ဖုန်းများကိုအားသွင်းနိုင်ပြီးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ရုံနှင့်မတူကွဲပြားသောလူတန်းစားမှလူများအချင်းချင်းသိကျွမ်းရန်အခွင့်အလမ်းရနိုင်သည်။ သင်နည်းပညာ (သို့) အဝေးရောက်ရှုထောင့်မှပါ ၀ င်လိုလျှင်၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ Project Applecart Facebook group.
သင် Cohen နှင့် FreeSource တို့၏အလုပ်ကိုပံ့ပိုးလိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာအလှူတစ်ခုလုပ်ပါ၎င်းသည်ငွေကြေးဖြစ်စေ၊ အသစ်ဖြစ်စေ၊ သုံးသောနည်းပညာဖြစ်စေ၊ ဖြစ်စေ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သောစီမံကိန်းများနှင့်အတူသင်၏အချိန်၊ ငွေနှင့်အထောက်အပံ့များသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်လက်လှမ်းမီသောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့နည်းပညာများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုယူဆောင်လာပေးသော FreeSource ၏နောက်ထပ်မစ်ရှင်ကိုကူညီနိုင်သည်။
အောက်မှာ Filed ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် သြဂုတ်လ 23rd, 2021 .
ဒိန်းမတ် ဒိန်းမတ် စွန့်ပစ်ထားသောဖုန်းမှအခမဲ့စာကြည့်တိုက်သို့